Yiziphi izici umbhangqwana ongajabule unazo? Bezzia
Yiziphi izici umbhangqwana ongajabule unazo?
UMaria Jose Roldan | 10/05/2022 22:12 | Ubudlelwano
Kukhona uchungechunge lwamanani angeke ashoda kunoma ibuphi ubudlelwano: uthando, inhlonipho noma ukwethemba. Zonke lezi zindinganiso zizosiza umbhangqwana ukuthi ujabule futhi uhlale ngokuhamba kwesikhathi. Kunalokho, ukungajabuli kobudlelwano kubangelwa kakhulu ubunzima umbhangqwana abanabo uma kuziwa ekuhlaleni ndawonye kanye nokuntuleka kwamanye amanani abonwe ngenhla.
Ngeshwa namuhla, kunemibhangqwana eminingi engajabule futhi abasijabuleli isibopho esidaliwe. Esihlokweni esilandelayo sikubonisa izici ubuhlobo obungajabulisi ngokuvamile obunazo nokuthi yini okufanele uyenze ukuze ugweme lesi simo.
Izici zobudlelwano obungajabulisi
Kunenombolo yezimpawu ezisiza ukuhlonza ubudlelwano obungajabulisi:
Ubudlelwano lapho izinga lokufunwa kwezinhlangothi zombili liphezulu kakhulu. Ngamunye ulindele ukuthi omunye enze ngokuvumelana nezidingo zakhe ngaso sonke isikhathi, ngaphandle kokucabangela umbono womuntu siqu wombhangqwana. Konke lokhu kudala izingxoxo nezingxabano ezingalizuzisi nhlobo ikusasa elihle lombhangqwana.
Umphumela wesidingo ukubekezelelana okuncane okukhona phakathi kwabashadile. Amaphutha athile aholela ezimpini phakathi kwamaqembu awavunyelwe. Ukubekezelelana okuncane kubangela ukuthukwa nokungafaneleki kube yinto yosuku futhi ukungajabuli kufakwe ngokugcwele phakathi kobudlelwane.
Ukusetshenziswa kwecala ukuze kuthethelelwe isimo somqondo kuyinto ephawula iningi lemibhangqwana engajabule. Umlingani akanakusolwa ngaso sonke isikhathi ngempilo yomuntu engokomzwelo. Konke lokhu kuzoletha izinkinga eziningi ebuhlotsheni futhi lokho kuphilisana kuba nzima ngempela kuzo zonke izici.
Umbhangqwana ongajabule awulona iqembu futhi ayikwazi ukuxazulula izinkinga ezahlukene ngendlela ehlangene. Ebudlelwaneni obujabulisayo, izinto zenziwa futhi zihlelwe ngendlela efanele, kucatshangelwa umbono womuntu ngamunye. Amaqembu amabili kufanele agwedle abheke ohlangothini olulodwa futhi asekelane ngokuhlanganyela.
Ebudlelwaneni obungajabulisi, abathintekayo baphikisana ngakho konke futhi babone ukuthi yikuphi okubili okulungile. Lokhu akukwazi ukuvunyelwa ngaphansi kwanoma yiziphi izimo futhi kuyatuseka ukuveza inkinga okukhulunywa ngayo ukuze kutholakale isisombululo esingcono kakhulu. Akusizi ukuthukuthela noma ukuqala ingxabano nomlingani wakho, ngoba lokhu kuzokwenza izinto zibe zimbi kakhulu.
Ngamafuphi, Akulula ukwenza umbhangqwana othile ujabule ngaso sonke isikhathi. Ukuhlala nomlingani wakho kwenza izinto zibe nzima futhi izinkinga zingavela njalo. Akweluleki ukugcina ubudlelwano obungajabulisi isikhathi esiningi ngoba kuyinto engazuzi noma yiliphi iqembu. Injabulo yinto okufanele ibe khona kunoma yimuphi umbhangqwana othathwa njengonempilo.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Psychology nezithandani » Ubudlelwano » Yiziphi izici umbhangqwana ongajabule unazo?
Izingozi zezempilo zama-sweeteners okwenziwa